Daraasad cilmi muhiim ah looga ogaaday xubnaha taranka ragga oo abaal marin heshay - Jigjiga Online
HomeWararka CaalamkaDaraasad cilmi muhiim ah looga ogaaday xubnaha taranka ragga oo abaal marin heshay
Cilmi baaris lagu cabiray farqiga dhinaca heer-kulka ee u dhaxeeya xiniinta bidix iyo tan midig ee ka mid ah xubnaha taranka ragga ayaa qeyb ka noqotay daraasado sanadkan ku guuleystay abaal marinta qaaliga ah ee Nobel-ka.
Khubarada ku takhasusay cilmiga taranka dadka ee lagu kala magacaabo Roger Mieusset iyo Bourras Bengoudifa ayaa cabirka heer-kulka ku sameeyay rag u dhashay dalka Faransiiska.
Waxay cilmi baaristaas ku sameeyeen isagoo dhar xiran iyo isagoo aan xirneyn labadaba.
Aqoonyahannadan ayaa markaas ka dib ogaaday in xiniinta bidix ay ka diirran tahay tan bidix, balse ay saas tahay kaliya marka uu ninku dharka xiran yahay.
Abaal marinta qaaliga ah ee lagu bixiyo dhinaca cilmi baarista caafimaadka ee la yiraahdo Ig Nobel ayaa looga dhawaaqay munaasabad ka dhacday Jaamacadda Harvard.
Natiijada cilmi baarista ay soo saareen ayaa lagu daabacay wargeys ka faallooda arrimaha la xiriira taranka bani’aadanka, waxayna khubaradu ku sharraxeen tijaabada ay sameeyeen iyo cilmiga ay ku ogaadeen markii ugu horreysay.
Waxay khubaradan ka codsadeen 11 rag ah oo ka shaqeeya boostada waraaqaha lagu diro inay muddo 90 daqiiqo ah meel istaagaan, halka ay iyaguna cabir ku sameynayeen heer-kulka kala duwan ee xubnahooda taranka.
Tijaabo kale oo ay hirgaliyeen ayey ku sameeyeen 11 nin oo ka mid ah darawaliinta basaska kaxeeya, kuwaasoo iyagana fadhiyay xilligaas.
Ig Nobels ayaa la guddoonsiiyaa natiijooyinka cilmi baarista ee mowduucoodu uu sanadkaas noqdo kan ugu muhiimsan.
Iyadoo taas loo eegayo, cilmi baareyaal kale ayaa sheegay in heer-kulka la xiriira xiniinyaha ragga ay saameyn buuxda ku leeyihiin shaqada xubnaha taranka.
Tayada dhinaca taranka ee ay leedahay shahwada ragga ku nool dalalka reer galbeedka ayaa hoos usii dhaceysa, laakiin wax yar unbaa laga ogyahay sidii horumar lagu gaarsiin lahaa.
Nin lagu magacaabo Craig Franklin ayaa BBC-da u sheegay in ay musiibo ku habsatay markii uu ogaaday inuusan wax shahwo ah lahayn gabi ahaanba.